Iswiidhen oo u Baahan Qashin la Gubo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Björn Larsson Ask/Scanpix.
KA GANACSIGA QASHINKA
Iswiidhen oo u Baahan Qashin la Gubo
La cusbooneeyay torsdag 7 juni 2012 kl 12.10
La daabacay torsdag 7 juni 2012 kl 09.16
Shirkadaha kuleeylka ee dalkan Iswiidhen ayaa ku howlan sidii ey u dhisi lahaayeen goobo lagu gubo qashinka haraaga raashinka si koronto looga dhaliyo, iyada oo ey weliba dhankaa baahi ballaaran ka aloosan tahay. Middaa ayaa dhalinineeysa inuu dalka Iswiidhen qashin ka soo iibsado dalka dibaddiisa.
– Iyada oo iminkaba ay qashinka baahi ka jirto ayey haddana shirkadaha qaarkood ku howlan yihiin sidii ey goobo hor le huga howl-geli lahaayeen. Iyadoona lagu macneeyey tallaabooyinkaa in xiisad loo hayo korontada laga dhaliyo gubidda qashinka. Mana ahan qashinka laga hadlayo kan dalka guddihiisa yaal ee waa kan waddammada dibadaha laga keeno, sida uu sheegay Weine Wiqvist, agaasimaha ururka shirkadaha qashin-gubidda.
Tiro gaareeysa 30 goobood ayaa dalka iminka ka jira ee qashinka lagu gubo, halkaasina oo sannadkii guba qashin culeeyskiisu gaarsiisan yahay 5,5 malyuun oo tan.
Waxaa sidoo kale kor u kacaya xiisaha loo qabo dhismaha goobo qashinka lagu gubo si quwad koronto looga dhaliyo, iyadoona haddii xiisahaasi halkaa ka sii socdo, islamarkaana la dhiso dhammaan warshadaha noocaasiya ee lagu gudo jiraa uu dalkani muddo lix illaa siddeed sannadood gudahood u baahan doono 30% qashin dheeriya ee dalka dibaddiisa laga soo waarido.
Wuxuu tira-koobku sheegayaa in dalka Iswiidhen u baahan yahay qashin uu culeeyskiisu gaarsiisan yahay 1,6 tan ee lagu gubo warshadaha qashinka ka dhaliya kuleeylaha. Halka ey shirkaduhu qoondeeyneyaan miisaaniyad-gelin ey ku sameeyaan xarummo hor leh, middaasina oo ka hor imaneeysa qorshooyinka u degsan ururka EU-da iyo dalkan Iswiidhen ee arrimmahaa la xiriira.
Danta laga leeyahey ayaa ah in marka hore la gubo qashin yar, si loo kala saaro noocyada qashinka iyo wixii dib loo isticmaali karo.
– Howlahani maaha sida aan u dooneeyno iney u dhacaan mustaqbalka. Dantayadu waxay aheyd in sidii marka hore qashin badan dib loogu isticmaali lahaa, sida ay sheegtay Catarina Östlund oo ka howl-gasha hayadda dhowridda dabeecadda..
Hase yeeshee mustaqbalka dhow ayey ka mideeysan yihiin hayadda badbaadada dabeecadda iyo shirkadaha qashin-gubka ka soo saara quwadda korontada in qashinka la gubo halkii uu dibadda ku ururi lahaa, sida ey iminkaba waddammo badani falaan.
– Waxaa qashinka lagu rasteeyaa bannaannada oo aanu macne sameeyn, halka kolka aad shiddo qashinka laga heleyo kuleeyl iyo quwad-koronto intaba. Sidaasi oo ey tahay ayuu kharash badan ku baxaa shirkadaha qashin-gubka ku howl-gala, kuwaasina oo mar walba u baahda qashin hor leh.
– Mustaqbalka waxaan dooneeyno maaha qashin badan ee la gubo, ee waxaan u baahannahey in qashinka laga soo saaro haraa fara badan ee dib loo isticmaali karo, sida ay sheegtay Catarina Östlund.
Baaritaanno badan ee la sameeyey ayaa lagu caddeeyey in aaney jirin saameeyn ballaaran ee cimilada uu ku yeesho kolka qashinka la kala waarideyo, halkii goobta uu yaal loo deeyn lahaa.
Waa sidee haddaba saameeynta ey goobaha qashinka lagu gubaa ku yeeshaan cimilada. Mise lagu oran karaa dadyowga hooyga ku leg goobo ka ag-dhow goobahaa in aaney jirin wax halis ah ee dhanka caafimaadkooda?
- Ma jirto halis sidaa u weyn ee ey ku yeelanayaan caafimaadka bulshada ka ag-dhow iyo cimiladaba. Way jirtaa inay ka soo baxaan xarummahaa qiiq wasakheeysan, hase yeeshee waxey leeyihiin mashiinno wax sifeeya, qaasatan marka laga hadlayo dalka Iswiidhen.
Hans Wrådhe, oo ka howl-gala hayadda badbaadada cimilada ayaa sheegey in halistu aanay ka imaneyn qashinka la gubo, hase yeeshee loo baahan yahay in xoogga la isugu geeyo sidii howlo ka tayo badan loo gelin lahaa.